राउटेलाई पहिलोपटक परिचयपत्र – Rara Khabar
राउटेलाई पहिलोपटक परिचयपत्र
परिचयपत्र देखाउ“दै राउटेका महामुखिया महिनबहादुर शाही । तस्बिर प्रकाश पन्त
कलेन्द्र सेजुवाल र ज्योति कटुवाल
पातलेखोला (दैलेख)– शनिबार दिउ“सो स्थायी परिचयपत्र वितरण गर्न गुरा“स गाउ“पालिकाको पातलेखोला पुगेको सरकारी टोलीलाई शंका थियो– राउटेहरुले सहजै परिचयपत्र स्वीकार्लान् त ? किनभने त्यसअघि नै लालीका“डा बजारमा भेटिएका केही राउटेले भनेका थिए– हामी परिचयपत्र लि“दैनौ“ । तर, बस्तीमा पुग्ने बित्तिकै मुखिया बीरबहादुर शाहीले टोलीलाई सहज बनाइदिए । ‘तपाइ“हरु हाम्रो घरमा आउ“दा हामी खुसी छौं, हाम्रा जनता पनि खुसी छन्,’ उनले भने, ‘मुखियाले बोल्यो भने बोल्यो–बोल्यो, कसैले नलिने कुरै छैन ।’
समुदायका तीनमध्येका एक मुखिया बीरबहादुरको यही भनाइस“गै राउटे समुदायले पहिलोपटक परिचयपत्र लिने बाटो खुल्यो । उनीहरुले गुरा“स गाउ“पालिका वडा नं. ८ कायम हुने गरी परिचयपत्र लिए । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्मा, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपाने र गुरा“स गाउ“पालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले संयुक्त रुपमा परिचयपत्र बितरण गरे ।
परिचयपत्र सबैभन्दा पहिले ग्रहण गर्ने व्यक्ति बने– महिनबहादुर शाही । ६० वर्षीय पूर्वमुखिया शाही हाल समुदायका संरक्षक छन् । सुरुमा ‘यो (परिचयपत्र) लिएर के काम ?’ भन्दै अन्कनाएका उनी केहीबेरपछि परिचयपत्रको महत्व बुभ्mदा खुसी देखिए । ‘अब योभन्दा बढी (नागरिकता) त नलिने,’ उनले भने, ‘सरकारले भत्ता दिन्छ, चामल दिन्छ भने त ठिकै छ ।’
फिरन्ते जीवन बिताउ“दै आएका राउटे समुदाय अहिले पातलेखोलामा छन् । गाउ“पालिकाले अतिलोपोन्मुख समुदायको लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि परिचयपत्र बितरण थालेको हो । गाउ“पालिकाको असार १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याई एकद्धारबाट भत्ता बितरण गर्ने र स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका अन्य सुविधा प्रवाह गर्नको लागि परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । यसको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ ३१ गते गाउ“पालिकालाई परिचयपत्र बितरण कार्य सुरु गर्न भनेको थियो । ‘परिचयपत्र बितरण भएपछि पहिलोपटक उहा“हरुको बिवरणसमेत सूचीकृत भएको छ,’ गाउ“पालिका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सुरुमा परिचयपत्र लिन नमाने पनि पछि यसले राउटे समुदाय र राज्यलाई नै सहज बनाउनेछ ।’
अतिलोपोन्मुख जातिको रुपमा रहेका राउटेको संख्या अहिले १ सय ४९ छ । उनीहरु ४२ घरधुरीमा बसेका छन् । परिचयपत्र लिए पनि उनीहरु एकै स्थानमा बस्न, लेखपढ तथा खेतीपाती गर्न र नागरिकता लिन भने अझै तयार छैनन् । यद्यपि, परिचयपत्र लिनुले उनीहरुमा बिस्तारै रुपान्तरणको संकेत देखिन थालेको छ । ‘हामीलाई पैसा दिए त भैगो, यो (परिचयपत्र) चाहि“दैन,’ बाटुली शाही नाम बताउने युवतीले भनिन्, ‘तैपनि मुखियाले लगिसके, म के गरु“ खै π’
मुखिया बीरबहादुर र संरक्षक महिनबहादुर लगायतले परिचयपत्र लगे पनि केही राउटे यसमा असन्तुष्ट देखिए । मुखियाद्धय सूर्यनारायण शाही र दीलबहादुर शाही शनिबार दिउ“सो बस्तीमा भेटिएनन् । मुखिया बीरबहादुरले सरकारी टोलीस“ग ‘सिकार गर्न गएका छन्’ भने पनि उनीहरु परिचयपत्र बितरण गर्न आउने जानकारी पाएपछि बिहानै गाउ“तिर गएका थिए । यद्यपि, परिचयपत्र बितरणमा सहजीकरण गरेको सामाजिक सेवा केन्द्रले बिस्तारै सबै राउटेलाई परिचयपत्र बितरण गरिने जनाएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष्ँ हिरासिंह थापाले सरकारले नै यो अभियान थालेकोले ढिलोचा“डो सबै राउटेलाई बितरण गरी उनीहरुको जीवन सहज बनाइने बताए ।
अर्कोतिर, परिचयपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिसमेत ‘अनुमानको भरमा’ राखिएको पाइएको छ । गाउ“पालिकाले बनाएको परिचयपत्रमा सबैको जन्ममिति उल्लेख छ । आप्mनो उमेरसमेत नबताउने उनीहरुले जन्ममिति कसरी भने ? यो प्रश्नले जन्ममिति हचुवाको भरमा राखिएको आशंका गरिएको छ । २०३२ चैत १ गते जन्ममिति उल्लेख गरिएका हरिबहादुर शाहीले परिचयपत्र भिरे पनि मिति भन्न सकेनन् । ‘म कति वर्ष भए“ खै ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे, ‘जन्म मिति भन्या के हो ?’
कान्तिपुर दैनिकबाट सभार ।
प्रकाशित मितिः ३१ असार २०७५, आईतवार १३:३८